Creative Writing » ဇာတ်လမ်းများလား ကံဇာတ်ဆရာရေ	35
ခင်ဇော် says: ငင် ဟယ် အို တစ်ပင်တည်း ရင်ထဲက နွယ်~~~
တောင်ပေါ်သား says: ဘာဆိုဘာမှ မထင်ရသေးဘူးကွယ်
ပျဉ်ဘိုးတွေ နားလည်ရတာလည်း အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1078
sorrow says: စစချင်း နွယ်ပလိုက်လို့မရသေးဘူးလေ.. သမီးလောက်ပဲခေါ် … သူပြောတာတာပဲနားထောင်..အကြံပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ တစ်ခွန်းတလေထောက်ပေး…အရက်သောက်တယ်..အိမ်ထောင်ပျက်..ကလေးသုံးယောက် သွားမပြောလိုက်နဲ့ ဦးနော်…. အနီးကပ်ရအောင်အရင်လုပ်..ပြီးမှတဆင့်ချင်းလုပ်ပါ ဆရာရဲ့ ..မပူနဲ့ .ကချင်တွေနားနေပြီး ခုထိ ခြုံခိုမတိုက်တတ်သေးဘူး …အဟိဟိ
တောင်ပေါ်သား says: နုထွားရေ
ကိုဘလက်ကားကိုတော့ ရယ်ဒီလုပ်ခိုင်းထားနော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 522
ဂျက်စပဲရိုး says: ဦးနဲ့ သမီး ဆိုတော့ကာ
တစ်ခုခု တော့ တစ်ခုခု ပဲ :P :P :P
တောင်ပေါ်သား says: သမီးဟုတ်ဘူးကွ ၊ ၂၅ လောက် လို့ မှန်းမိတယ် ၊
ငပိကြော် ကြိုက်ဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
ဂျက်စပဲရိုး says: ဦး က သာမိ ကို သတိ ထားမိနေတာ ကြာဘာဘီ။
တောင်ပေါ်သား says: အေးပါ နီ မြှောက်ပေးတာနော်
ဂျက်စပဲရိုး says: စေတနာ တွေပါလေ။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ရေးးး
တောင်ပေါ်သား says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: အနောက်တိုင်းဆန်ဆန်.. ဇတ်လမ်းလေးလုပ်ပါဗျို့…။
မလိမ်ကြေး.. မညာကြေး.. (ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1078
sorrow says: ကျော်လေ…လေယဉ်မယ်လေးကို အလွန်ကြွေဗျ… သူကလဲအင်းမလုပ်အဲမလုပ်..စိတ်မရှည်တာနဲ့.တရက်သားချစ်တယ်ကွာ ဆိုပြီး ရင်ဘတ်ထဲဆွဲထည့်ပစ်တာ လူမြင်ကွင်းမှာ..မတောင်းပဲအဖြေရရော. သူဘာဆိုဘားမှမတတ်နိုင်…. အစ်ကိုလဲ ..ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှာ လူရှုပ်ရှုပ်အချိန်စောင့်ပြီး အဲ့အကွက်သုံးကြည့်ပါလား… ကျော့်တုန်းကအောင်မြင်တယ်..အဟိဟိ
ရာမည says: 376 – 377 ချဲဂဏန်းပေတာပါခင်ဗျာ
sorrow says: ဒီရဲနဲ့တော့…ခက်ပြီ..အဲ့တာနဲ့ ဟိုကကြောက်ပြီးမလုပ်ရဲတာနဲ့ ..အချုပ်ထဲမရောက်တော့ဘူး ..ဖေးဖေးမမ .အရောက်ပို့မယ် မရှိဘူး…ပုဒ်မတွေနဲ့လာခြောက်နေတယ်… အစ်ကိုမကြောက်နဲ့ …ကျော်တောင်ဘာဆိုဘားမှမဖြစ်ဘူး …ပြေလည်နေတာတွေ့တယ်ဟုတ်….အငိငိငိ
Was this answer helpful?LikeDislike 506
ရာမည says: ဘယ်အချုပ်ခန်းကို ပဲဝင်ဝင်
Mr. MarGa says: အဲဒါ
အဖြူ အမည်း ရာနှုန်းပြည့် ကွဲကွဲလွဲလွဲ သိရတဲ့နည်းပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ​ဟေ့လူကြီး ကြည့်​လုပ်​​နော်​ ​တော်​ကြာမှ
ကံဆိုးလိုက်​​လေခြင်း ဆိုပြီး ကံကို အပြစ်​ပုံ မချနဲ့ ။ ဒါမျိုးက သိပ်​​လောကြီးလို့မရသလို ​အေးတိ ​အေးစက်​ကြီးလည်း ​နေလို့မရဘူး တစ်​ဆင့်​ပြီးမှ တစ်​ဆင့်​ မှန်​မှန်​​လေးတက်​သွား ကိုယ်​စိတ်​၀င်​စား​နေတာ ဖွင့်​မ​ပြောပဲ နဲ့ သူသိ​အောင်​လုပ်​ ။ အတင်းကာ​ရော ဇွတ်​​ရောခိုင်း​နေတာမဟုတ်​ဘူး​နော်​ ။ ကျုပ်​အ​တွေ့ အကြုံ အရ​ပြောရရင်​ သိပ်​ပြီး အတင်းဇွတ်​ကပ်​မိတဲ့ အခါ နှစ်​ရက်​ သုံးရက်​​လောက်​နဲ့ ​ပြောစရာ စကားက ကုန်​သွားပြီး ဘာဆက်​​ပြောရမှန်းမသိ ဖြစ်​သွားတတ်​တယ်​ ။ ပြီး​တော့ သူ့အ​ကြောင်းကို သိနိုင်​သမျှ သိ​အောင်​လုပ်​ ။ အဲ့ဒိလို သိတာ​တွေကို သူအကုန်​မသိ​စေနဲ့ဗျ ။ တစ်​ချို့​ကောင်​မ​လေး​တွေက စ​တွေ့​တွေ့ချင်း သူတို့အ​ကြောင်း ​တော်​​တော်​များများသိ ​နေတာ သ​ဘောမကျတတ်​ဘူး ။ ပါးပါးနပ်​နပ်​ ချဉ်းကပ်​ပါဗျာ ။ ကံ​ကောင်းပါ​စေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4108
Foreign Resident says: အားရတယ် ။ အားကျတယ်ကွယ် ။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ဘာများလဲလို့ဗျာ
မွသဲ ( 17082011 ) says: ခီများသိဒါဒေအတော်များနေဘီ အရှင်ထားလို့မီဖစ်တော့ဘူး ငွင်းငွင်းငွင်း ရုပ်ရှင်ထဲမာ အိုက်လိုပေါဒါဘဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: အသက်က သိပ်မကွာပါဘူး အူးမျိုးရယ်။ ဟိုဆိုရိုးတောင် ရှိသေးတယ်၊ ဒွေးချိုး လေးတိုးဆို မဟုတ်လား။ ဒွေးသာချိုးလိုက်ပါ၊ လေးလဲတိုးမနေပါနဲ့တော့ အဟွတ်!
ရာမည says: နိုင်ငံရေးတွေ သိပ်မငြိမ်ဘူးခင်ဗျ ကမာရွတ်အချုပ်ခန်းမှာ နေရာကြပ်နေတယ်ကြားမိပါတယ် ခင်ဗျာ
ဟီဟိ သူကျေနပ်လို့ အဝှါပြုလဲ ပြုံးပြုံးပါခင်ဗျ
ဒဒိထားနော် မပြောမိဘူးမဖစ်စေနဲ့ အာဟိ အာဟိ
Alinsett@Maung Thura says: အဲ… ဇာတ်လမ်းလေးကပဲ… ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဆန်းနေသလား..
တောင်ပေါ်သား says: နုထွား ၊ ကောင်းကင်ပြာ ၊ အဘဖော ၊ အဘနီ ၊ မွသဲ
Foreign Resident says:့ တောင်ပေါ်သား says:
တောင်ပေါ်သား says: အဘဖော
တိုးသာ ဆုတ်သာပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2278
Ma Ei says: ( ကျွီ ကျွီ ဒုန်း )
တောင်ပေါ်သား says: ပွင့်ဘော်ဒီမျိုးဆို ကျနော်အရိုးကျိုးပြီပေါ့ အမအိရယ်
အခုက နန်းခင်ဇေယျာ ဘော်ဒီမျိုးလေး အဟေး ဟေးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: အဟိ … အသက် ၅၀-ကျော်မှ ကံပေါ် စန်းထ…
တောင်ပေါ်သား says: ဝက်သက်ပျောက်ဆေးလေး ဘာလေး ရှာထားပေးဦး ကိုကျောက်ရေ
မြစပဲရိုး says: ကျွန်မ ငယ်တုန်းက သုမောင် သီချင်း တစ်ပုဒ် ရှိတယ်။
တောင်ပေါ်သား says: ဘာတဲ့လဲ ဟင် ?
မြစပဲရိုး says: “အန်ကယ့် ခေါင်းပေါ်က ဆံပင်ဖြူ တွေ က အတော် ရီစရာ ကောင်း အောင် ထောင် နေတာ။
Crystalline says: ကံတရားက အူမျိုးဖက်ရှိနေပုံရတယ်….. မိုးဒီလိုလူဝကြီးများပြိုကျပါလား…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.